အဆိုပါ PGA Tour အပေါ်တစ်ဦး Pro ကိုအဖြစ်က Tiger Woods '' ပထမဦးစွာပြိုင်ပွဲ
ဝုဒ်ပထမဦးဆုံးလိုလားသူလှည့်အပြီးကစားရှိရာ 1996 Milwaukee ပွင့်လင်းဖြစ်ပါတယ်
ဘယ်အချိန်မှာအဘယ်မှာခဲ့ပါ က Tiger Woods ကသူ့လိုလားသူပွဲဦးထွက်စေ? ဝုဒ်ပထမဦးဆုံး 1996 မဟာ Milwaukee ပွင့်လင်းမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်သီးအဖြစ်ကစား, လင်းဒေးလ်၏ Milwaukee ဆင်ခြေဖုံးဘရောင်းမင်ပန်းခြံဂေါက်ကွင်းမှာကစားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါပြိုင်ပွဲသြဂုတ်လ 29 ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီး 1996-ဒါကြောင့်ရက်စွဲဝုဒ်တဲ့ professional အဖြစ်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဂေါက်သီးရိုက်ချက်များ hit ဂေါက်သီး-နှင့်စက်တင်ဘာလ 1, 1996 ရက်တွင်အဆုံးသတ်ပါတယ်။
ဒီတော့ဘယ်မှာဝုဒ်ကသူ့ကြေးစားပွဲဦးထွက်အတွက်အပြီးသတ်ခဲ့တာလဲ 60 နေရာကိုတစ်ဦးလည်စည်းပါ။
ရဲ့ဝုဒ် '' လိုလားသူပွဲဦးထွက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပိုမိုမှတဆင့် run ကြပါစို့။
ဝုဒ် 1996 မဟာ Milwaukee ပွင့်လင်းဖို့တယ်ဘယ်လို
တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ် 25, 1996 တွင်, အပျော်တမ်းဂေါက်သီးက Tiger Woods ကတော့အနိုင်ရခဲ့ အမေရိကန်အပျော်တမ်းချန်ပီယံရှစ် ။ သူကယောက်ျားရဲ့အမေရိကန် Am သုံးခုဆက်တိုက်ကြိမ်အနိုင်ရဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးဂေါက်သီးဖြစ်လာခဲ့သည်။
အသက် 20 မှာဝုဒ်ကလိုလားတဲ့ဖွင့်ဖို့အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူကတစ်ဦးကိုလက်ခံ စပွန်ဆာဖိတ်ကြားချက်ကို သာ. ကွီးမွတျ Milwaukee ပွင့်လင်းတွင်ကစားရန်။ နှစ်ရက်အကြာတွင် GMO ပြိုင်ပွဲရက်သတ္တပတ်၏အင်္ဂါနေ့က, ဝုဒ်သူလိုလားတဲ့လှည့်ခဲ့ပါတယ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှတဆင့်ကြေညာခဲ့သည်။
ထိုအခါပြိုင်ပွဲစတင်မတိုင်မီတနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က, ဝုဒ်ဂေါက်သီးနှင့်အားကစားမီဒီယာများက, ဒါပေမယ့်အမျိုးသားရေးသတင်းဆိုင်များတွင်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးဂျာနယ်လစ်များကမပေးမယ့်ကသူ၏ကျော်ကြားသော "မင်္ဂလာပါလောက" သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ-တက်ရောက်ခဲ့သည်ကျင်းပခဲ့တယ်။
ဝုဒ်, နောက်ပိုင်းအကြီးမားဆုံးဂေါက်သီးဖြစ်ရပ်ဆန်း ဂျက် Nicklaus , လိုလားသူလှည့်ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါမဟာ Milwaukee ပွင့်လင်းသည်သူ၏လိုလားသူပွဲဦးထွက်မဘို့ရာခန့်ခံခဲ့ရသည်။
ဒါပေမဲ့ဒီမှာပျော်စရာတကယ်တော့င်: ဝုဒ်ပတ်ပတ်လည် $ 40 သန်းတန်ဖိုးရှိပဲလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ထောက်ခံချက်အပေးအယူခဲ့သော်လည်းသူသည်ပြိုင်ပွဲရဲ့ $ 100 အ entry ကိုသင်တန်းပို့ချ Butch သဟဇာတထံမှခံစားရချေးခဲ့ရတယ်။
1996 မဟာ Milwaukee ပွင့်လင်းအတွက်ဝုဒ် '' ရမှတ်
တစ်ဦးလိုလားသူဂေါက်သီးအဖြစ်ဝုဒ် '' ပထမဦးဆုံးအလှည့်လည်မှာတော့သူတစ်ဦးကတော်တော်လေးကောင်းသောစတင် 67. 4-အောက်မှာတစ်ရမှတ် carded ။ ဝုဒ်ငါးခုလေဖြတ်ဦးဆောင်ပယ်ပြီးသားဖြစ်ခဲ့သည်ဒါသို့သော်ထိုနေ့, Nolan Henke 62 ပစ်သတ်။
တစ်ဦးလိုလားသူအဖြစ်ဝုဒ် '' ပထမဦးဆုံးရိုက်ကူး? ယင်းတွေ့ရှိခဲ့သော 336-ခြံ drive ကို fairway ပထမဦးဆုံးအပေါက်ပေါ်မှာ။
က Round2မှာ, ဝုဒ်ခေါင်းဆောင်များနောက်ကွယ်မှ 136 6-အောက်မှာရှစ်လေဖြတ်မှာရပ်တည်ရန် 69 ပစ်သတ်။ သို့သော်သူသည်ဖြတ်အောင်ပြု၏။
တစ်ဦးက Third-ပတ်ပတ်လည် 73 ပြိုင်ပွဲသူ့ရဲ့အဆိုးဆုံးရမှတ်ခဲ့, သူသည်နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ 68 နှင့်အတူပြီးဆုံး။ ဝုဒ် '' စုစုပေါင်းရမှတ် 60 နေရာကိုချည်ထား, 7-အောက်တွင် 277 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကဆုရှင်, Loren Roberts သည် (သူတစ်ဦး PLAYOFF အတွက်ဂျယ်ရီကယ်လီရိုက်နှက်) နောက်ကွယ်မှ 12 လေဖြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
"လူအပေါင်းတို့ကျော်, ငါတစ်ပတ်ပျော်စရာတွေအများကြီးခဲ့ထင်ပါတယ်။ လိုလားသူ, အပေါငျးတို့သညျအခွားသောအရာတို့ကိုလှည့်, ဖြစ်ပျက်သမျှသောသူတို့နှင့်အတူ, ငါတော်တော်လေးကောင်းသော play နိုင်ခဲ့သည်ခံစားရတယ်။ ကိုယ့်ကိုမဆိုကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်စေနိုင်ဘူး။ "
နောက်ထပ်ပထမဦးစွာ: တစ် Pro ကိုအဖြစ်ကျား၏ပထမဦးဆုံး Ace ကို
ကျားသူ့ရဲ့ပထမဆုံးလိုလားသူပြိုင်ပွဲအနိုင်ရခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကမည်သို့ပင်ဆိုစေအံ့မခန်းတစ်ခုခုပြုသူတစ်ဦးကိုဖန်ဆင်း ပေါက်-In-One ။ ဒါဟာနောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဝုဒ် 188 ကိုက်ကနေတန်းတူ-3 14 အပေါက် ACE မှ 6-သံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဝုဒ်က "ငါ, ငါ့ caddy ပြောသည် '' ကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာသူတို့ကိုပယ်တစ်ခုခု Hole စေခြင်းငှါ, ဂရင်းအပေါ်ဘာမှလုပ်မပေးနိုငျကတည်းကငါမှန်းဆ။ '"
ဝုဒ်ကသူ့ Pro ကိုပွဲဦးထွက်ငွေဘယ်လောက် Make ခဲ့သလား
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်ဝုဒ် '' ပထမဦးဆုံးလစာ $ 2,544 များအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်လာမှသွားသူတစ်ဦးသည်လူအဘို့အဦးနှိမ့်ချက start ဂေါက်သီးရဲ့ပထမဦးဆုံးဒေါ်လာဘီလျံရရှိ ။ ဒါပေမယ့်ထို့နောက်ဂျက် Nicklaus သာသည်သူ၏လိုလားသူပွဲဦးထွက်အတွက် $ 33,33 ရရှိခဲ့သည်။
ဝုဒ် '' အနိုင်ရရှိမှုနည်းလမ်းများမကြာမီတွင်ခဲ့
ဒါဝုဒ် 1996 မဟာ Milwaukee ပွင့်လင်းမှာမိမိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပွဲဦးထွက်နှစ် 60 ပြီးလေ၏။ သူ၏ပထမဦးဆုံးထိပ်တန်း 10 finish ကိုနှစ်ပတ်အတွင်းနောက်ပိုင်းမှာသူပဉ္စမနေရာကိုချည်ထားရှိရာကို Quad City, Classic, ရောက်တော်မူ၏။ သူ၏ပထမဦးဆုံးထိပ်တန်း3finish ကို (တတိယအဘို့အချည်ထား) သည်ဘီစီပွင့်လင်းမှာအောက်ပါအပတ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဝုဒ် '' ပထမဦးဆုံးအနိုင်ရရှိအကြာတွင်ခြောက်လခန့်အောက်တိုဘာ 6, 1996 ရက်တွင်ကောက်ချက်ချသော 1996 Las Vegas မှဖိတ်ကြားချက်ကိုမှာဖြစ်ပျက်နှင့်အညီ, ဝုဒ်ဟာကြီးစိုး 1997 မာစတာ ။ ထိုအရာကြွင်းလေသမျှသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်မှာရှိက Tiger Woods High School တွင်ကိုသွားပါခဲ့သလား (သူကဂေါက်သီးရိုက်အဖွဲ့တွင်ခဲ့?)
ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား NICKNAME: အဆိုပါ Big စာရင်း
ဂျော်နီ Miller က: အဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား-ဖွင့-ထုတ်လွှင့်များ၏ဇီဝ
ဘယ်အချိန်မှာများနှင့်အဘယ်မှာရှိက Tiger Woods ကသူ၏ပထမဦးစွာဗိုလ်မှူးချန်ပီယံရှစ် Won
Bobby ဂျုံးစ်နှင့်ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းကျော်ကြား Quotes
ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမားဒါဝိဒ်သည် Duval ၏ဇီဝ
အဖမ်းခံရဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု: ထောင်အတွက်အချိန် Spent သူကားအဘယ်သူ 12 ဂေါက်သီး
Louise Suggs: အ LPGA ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ, 11-အချိန်ဗိုလ်မှူး Winner
ထိပ်တန်းနည်းပြ မှစ. ပြိုင်ပွဲသိကောင်းစရာများ - ရေကူးကန်ရိုက်ဖို့အတွက်ဘယ်လို
စာသားမသွားလာရန်ဖို့ Features - မာတိကာ, ဝေါဟာရနှင့်အညွှန်းကိန်း
Intellectual Property ရှေ့နေများ-ကာကွယ်ခြင်းနယူးအကြံပြုချက်များ
ရှုပ်ထွေးခြင်းဖြင့် Limited ဖက်ဒရယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးအစီအစဉ်များ
Kurt Angle Timeline ကို
'' ပက်စကွာ '' ၏အတော်များများကဆိုလိုအကြောင်းလေ့လာပါ
အကောင်းဆုံး Anthrax အယ်လ်ဘန်
ထိပ်တန်းကောလိပ်မတ်လ Band Programs ကို
ထိပ်တန်း 10 ဦးအနည်းဆုံးခိုးကားဟောင်း
အဆိုပါဘွဲ့လွန်ကျောင်းအဆင့်လက်ခံရေးအင်တာဗျူး Ace လုပ်နည်း
ထိပ်တန်း 10 ဟော့ပေါ့ပ်သီချင်းများမေလ 6, 2014
6 ဂရိတ် Humphrey Bogart, Movies